Booliska Norway oo gudaha u galay Labo Maqaaxi oo Somali leedahay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaBooliska Norway oo gudaha u galay Labo Maqaaxi oo Somali leedahay
Photo: Vegar Vatn
Booliska Dalka Norway gaar ahaan Caasimada Oslo ayaa xalay qaab roondo ah u gaaray Xaafadaha Ajaanibta halkaasi oo ay gudaha u galeen ku dhawaad 3 Maqaaxi oo ajaanib leedahay.
Booliska ayaana Qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka ku shaaciyay warbixinta iyagoo sheegay in labo kamid ah ay leeyihiin Somali.
Marka uu halkaasi gaaray Booliska waxay ugu tageen tiro ka badan dadkii loogu tala galay in ay goob iskugu yimaadaan.
Ku dhawaad 33 Qof ayaa hal Qol loogu tagay kuwaasi oo turub ciyaarayay halka 49 qof oo kale ay isku qol ku daawanayeen Ciyaaro.
inkastoo Ganaaxa lacageed ee Qofka jabiya Sharciga uu yahay 20,000 kr oo ganaax ah hadana dadkii goobta loogu tagay lama ganaaxin taasi badalkeeda Booliska ayaa sheegay in la ganaaxayo milkiilayaasha goobaha maqaayadaha ee lagu qabtay sharci darada.
Dhacdadaan ayaa imaaneysa iyadoo Gudoomiyaha Degmada Oslo uu shalay shaaciyay in Xaalada Corona uu faraha ka siibaxyo loona baahanyahay in sharciga la raaco.